Manchester City oo laga mamnuucay tartannada naadiyada Yurub laba xilli ciyaareed - BBC News Somali
Manchester City oo laga mamnuucay tartannada naadiyada Yurub laba xilli ciyaareed
Kooxda Manchester City ayaa laga mamnuucay tartanada naadiyada Yurub labada xilli ciyaareed ee soo socda ka dib markii lagu helay in ay si "cad ugu xad gudubtay" xeerarka xuquuqda baahinta iyo hufnaanta maaliyadeed.
Kooxdan oo haysata koobka horyaalka Ingiriiska ayaa sidoo kale lagu ganaaxay lacag dhan 30 milyan oo Euro.
Waxay se kooxdu haysataa fursad ay racfaan kaga qaadato go'aankan oo ay u gudbiso maxkamadda garsoorka Isboortiga.
Maamulka Manchester City ayaa sheegay in ay "ka xun yihiin laakiin aanu la yaab ku noqon go'aankaa eexda ah" oo ay racfaan ka qaadan doonaan.
Guardiola: ‘Ma filaayo in Messi uu ka tagaayo Barcelona’
Gudig la socodka xisaabaadka naadiyada ee magaceeda loo soo gaabiyo CFCB ayaa sheegtay in kooxdu jabisay xeerarka maadaama oo ay "buunbuunisay dakhliga ka soo gala taageerada dhaqaale ee ay hesho ee xisaabaadkeedii sannadihii 2012 iyo 2016".
Waxa kale oo wararku tibaaxeen in sidoo kale kooxdu mudan karto in dhibcaha tartanka haatan socda ay ka haysato wax laga jari doonoo maadaama oo xeerarka xidhiidhka kubadda cagta Ingiriiska iyo kuwa xidhiidhka kubadda cagta ee Yurub ay wax badan iskaga mid yihiin.
Image caption Tabobaraha Man City Pep Guardiola
Waxa se jirta in aan ciqaabtaasi saamayn doonin kooxda hablaha ee Manchester City.
Warbixin ay soo saartay Manchester City ayay ku tidhi "kooxdu waxay had iyo goor doonaysay in ay hesho gole madax banaan oo aan eexayn oo ay ku soo bandhigto caddaymaha aan la dafiri karin ee ay ku garnaqsanayo. Bishii Diisember 2018 hanti dhawraha guud ee UEFA si waadax ah ayuu u baadhay xisaabaadka kooxda waxaanu sheegay in uu diyaar u ahaa in uu Manchester City u soo gudbiyo wixii u soo baxa ka horta inta aan wax baadhis dembiyeed ah la bilaabin"
Go'aankani intii aanu soo bixin ka hor isku aad aadka kooxaha ee tartanka horyaalka Yurub waxay Man City isku soo beegmayeen kooxda Real Madrid oo ay wareegga labaad is aragga koobaad wada ciyaari lahaa 26 bishan Feeberweri.
Gudoomiyaha horyaalka Spain ee La Liga, Javier Tebas, ayaa ku amaanay EUFA in "ay kama dambaystii go'aan meel mara gaadhay".
"Adkaynta xeerarka maaliyadeed iyo in la ciqaabo ciddii ku xad gudubtaa waxay muhiim u yihiin mustaqbalka ciyaaraha kubadda cagta" ayuu yidhi.